Fitaterana an-dalamby: Hahazo lohamasinina roa ny FCE
Ho tonga alohan’ny farany taona 2019 ny lohamasinina anakiroa ho an’ny Lalamby FCE (Fianarantsoa Côte Est). Hiazo an'i Espagne ato ho ato ny teknisianina ao amin'ny FCE hijery ny lafiny ara-teknika mikasika izany.
Misedra olana matetika ny fifamoivoizana an-dalamby amin’ny FCE noho ny fahanteran’ny lohamasinina, ny lalamby tsika rahateo efa nilaozan'ny toetrandro, satria kely loatra ny elanelan'ny vy, nefa ny lohamasinina vokarina ankehitriny efa be velarana.
Mitana anjara toerana lehibe aty amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany anefa ny fisian’io zotran-dalamby io.
Moramanga: Tovovavy mpiadina bakalôrea namoy ny ainy teo ampiatrehana adina ara-panatanjahantena
Teo amin’ny zotra farany amin’ny hazakazaka lavitrezaka no nitranga ny loza, omaly alakamisy 08 aogositra 2019. Nitambotsotra tampoka i Viollette. Nifamonjen’ireo mpitsabo manara-maso ny adina ara-panatanjahantena amin’ny fanadinana bakalôrea izy, natao ny vonjy aina, avy eo nentina avy hatrany namonjy hopitaly. Tsy tana anefa ny ainy, na nanao ezaka rehetra aza ny mpitsabo.
20 taona i Viollette, zanaka pastera. Kilasy famaranana sokajy A izy, mianatra amin’ny sekoly tsy miankina. Omaly ihany dia efa nentin’ny fianakaviany niazo an’i Morarano Gara, tanindrazany izy.